सेयर बजार : ‘एभ्री ट्रेण्ड इज योर फ्रेन्ड’, तपाई कत्तिको मान्नुहुन्छ ? – Arthatantra.com
सेयर बजार : ‘एभ्री ट्रेण्ड इज योर फ्रेन्ड’, तपाई कत्तिको मान्नुहुन्छ ?
काठमाण्डौं । सेयर बजारमा एउटा भनाई छ, ‘एभ्री ट्रेण्ड इज योर फ्रेन्ड’ अर्थात् बजारको जुनै प्रवृत्ति पनि तपाईको साथी हुन सक्छ ।
यसपटक पनि त्यही भएको छ । बजारमा अहिले बजार घट्नै पर्छ भन्ने एकथरी छन् बजार बढ्नै पर्छ भन्ने अर्काथरी अतिवादी रुपमा वकालतमा लागेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा यो बिषयमा लिएर यी दुई पक्ष कोको होलो मचाई रहेका छन् । तर, यसबीच बजारमा खेल्न जानेका लगानीकर्ताहरु भने यसलाई पनि अवसर बनाइरहेका छन् ।
दुईथरीका फेसबुके अन्तरक्रियाका बीच सेयर लगानीकर्ता तथा विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले गत फागुन ३ गते फेसबुकमै लेखे : बजार किन घट्यो भनेर बिश्लेषण गरेर धेरै समय विताउनुभन्दा बजारले कस्तो अवसर दिदैछ भनेर त्यसको विश्लेषण गरेर फाइदा लिने तयारी गर्नु राम्रो हुन्छ ।
बजारको पछिल्लो तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुअघि नेप्सेको उतार चढावलाई हेर्दा यो सुचक दुई पटक १३ सय मुनि पुगेर फर्केको देखिन्छ । यहाँ अधिक लगानीकर्ताको मनोविज्ञान नेप्से १३ सय मुनि झर्नु पर्ने अवस्था छैन् भनेर रहेको देखिन्छ । यही कारण १३ सय मुनिको बिन्दुलाई नेप्सेले पनि दरिलो टेवा बनायो । पहिलो पटक नेप्से १२५२ बाट फर्केर १३६९ मा आइपुग्दा लगानीकर्ताले केही कम्पनीमा २० प्रतिशतसम्म प्रतिफल निकाल्न भ्याए ।
दोस्रो पटक १२९९ बिन्दुमा पुगेर आइतबारसम्म १३८१ मा आइपुग्दा लगानीकर्ताले यसपटक ३३ प्रतिशतसम्म लाभ पाएका छन् । १० प्रतिशतभन्दा माथी प्रतिफल पाउँने कम्पनीको संख्या नै ३१ व्टा रहेका छन् । १० भन्दाकम र ५ प्रतिशतभन्दा बढि प्रतिफल मिलेको कम्पनीको संख्या नै २२ वटा छ ।
यसबीच याद राख्नु पर्ने कुरा के छ भने एकाध कम्पनी जसमा ठुला लगानीकर्ता छन्, तिनमा नियोजित रुपमा पनि मूल्य उच्च बनाइएको भने छ । आइतबार एकै दिन उच्चले वृद्धि भएको कारण पनि केही कम्पनीको समग्रमा निकै उच्च प्रतिफल देखिएको छ । त्यसबाहेक कतिपय कम्पनीको हकप्रद, नयाँ सेयर लगायतका खबरले पनि मूल्यलाई भने प्रभाव गरेको भने देखिन्छ ।
तर यसबचि याद गर्नै पर्ने कुरा के हो भने बजारमा सबैबाट नाफा मात्र हुँदैन् । यो अवधिमा १२ कम्पनीको मूल्य २ प्रतिशतदेखि ५१ प्रतिशतसम्म घटेको पनि छ । यसमा केही कम्पनीको भने बोनस तथा हकप्रद समायोजनले पनि मूल्य उच्च घटेको हो । यस्तोमा प्राप्त हुने बोनस वा हकप्रदबाट केही घाटा परिपुर्ती भएको वा नाफा नै भएको अवस्था पनि हुन भने सक्छ । यसबाहेक बजार भनेको जोखिममुक्त क्षेत्र भने होइन त्यसैले कम्पनी वा सेयर प्रवृत्ती नबुझिकन लगानी गर्दा भने घाटामा पर्न सकिने सम्भावना नकार्न सकिदैन् ।
७ चैत २०७३, अनलाईनखबर, ११।००
सेयरमा गीरावट आउँदा वा कम्पनी डुब्ने अवस्थाको नोक्सानीबाट कसरी बच्ने ? काठमाडौ । तपाई सेयर बजारको लगानीकर्ता हुनुहुन्छ र यो सेयर बजारमा लगानीलाई जोखिममुक्त […]